octobre 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 19/10/2014 – Toriteny
Mialoha ny hanazavantsika ny Evanjely dia mila azontsika tsara ny atony nitenenan’i Jesoa azy. Iverenantsika azavaina ireo rehetra antokon’olona voalaza etsy amin’ny Evanjely.
Voalohany tao dia ny farisianina. Ny farisianina dia olona mifanohitra amin’I Jesoa ireo, ary Jesoa rehefa miteny ny farisianina dia lazainy fa mpiatsara ivelatsihy ireo: miseho ho tsara ety ivelany, nefa ny ao anatiny dia zavatra hafa. Miseho ho mpivavaka ety ivelany nefa ny fiainany tsy araka izay. Ny farisianina koa dia olona fatra-pitandrina ny lalàna, ary mitsikera sy manara-maso ny olona izay tsy manaraka ny lalàna.
Dia misy koa ireo voalaza hoe herôdianina. Mazava fa nalaina avy amin’ny teny hoe Herôda izany; ny ao an-tsaina voalohany dia hoe mpanjaka izay.ka ny herodianina dia ireo olona mpankato, mpanaraka ary mahazo tombon-tsoa amin’ny mpanjaka. Ka Herôda tamin’izany andro izany dia tsy manam-pahefana firy fa karazana marika na tandindona fotsiny ihany, famantarana fotsiny ihany fa tsy manam-pahefana na kely ary; ary ireo moa no tena voalaza eto.
Ny firenena jody tamin’ity andro niainan’I Jesoa ity dia teo ambany fanjanahan-tany rômanina, k any amperora tamin’izany andro izany dia antsoina hoe “César”. Ny César dia tahaka ny hoe Ranavalona (teto amintsika); samy manana ny anarany izy ireo. Ny fiantsoana ny amperora rehetra dia natao hoe César, fa ny tena anarany dia I Tiber. Izay rah any ara-tantara. Tiber no César nanjaka tamin’io andro io. Ka tsar any ahaizantsika io antokon’olona io.
Ny farisianina, ny herodianina. Ireto farany dia mpanohana ny fanjakana rômanina satria matahotra ny ho very seza dia manohana ny fanjakana rômanina. Fa ny tena mpanohitra dia ilay antokon’olona antsoina hoe “Zelotte” – mpanohitra ireo. Raha tamin’ny fanjanahan-tany teto amintsika, dia ireo angamba no MDRM, na koa Menalamba. Fa manao ady anaty ankata ireo ary mamono miaramila rômanina izay tratrany any ambadimbadika any. Ary mitaona ny olona tsy hando a hetra. Ao ny fitiavan-tanindrazana izay ananan’ireto Zelotte ireto, ka mitraotra sy mampiasa eritreritra ka mitaona ny olona tsy handoa hetra.
Fa ny herodianina sy ny farisianina tsy misakana ny olona amin’izay. Izay ity tantara ity. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 19/10/2014 – Toriteny
Aloavy ho an’i Sezara izay an’i Sezara ary ho an’Andriamanitra izay an’ Andriamanitra. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 19/10/2014 – Tenin’Andriamanitra
Ao amin’ny vakiteny voalohany, Izaia mpaminany mitodnra hafatra amin’ny vahoakan’Israely izay toa very fanantenana, malahelo, tsy mahita lalan-kizorana. Tany ho any amin’ny taon-jato faha-8 alohan’ny nahatonngavan’I Jesoa Kristy, dia tandindomin-doza ny fanjakan’I Jodà, fanjakan’Israely izany, fanjakana taty atsimo izay nampalaza andry Davida sy Salomôna. Nefa ny vahiny izay tonga haka ny fanjakana dia dia mihaodiaody manodidina, ary ny manodidina an’I Jerosalema dia efa rava. Tamin’izany indrindra Izaia no nitondra teny fampanantenana, niteny fanambarana avy amin’Andriamanitra. Dia nambarany fa tsy izay ratsy hitan’ny vahoaka tamin’izany fotoana izany, loza mananontanona. Tsy izany no tompon’ny farany. Etsy an-daniny izy miteny ny amin’ny hoe fitsaran’Andriamanitra fa tsy fitsarana hamotika, hanimba, fa fitsarana hitondra fiarovana ho an’ny vahoakany. Dia asehon’Izaia mpaminanay amin’ny teny fanoharana: “ho avy ny fotoana hanomanan’Andriamanitra fanasana ho antsika, dia hiaraka hihinana isika miaraka aminy. Moa va tsy hiaraka hihinana amin’ny mpampakatra noho ny fampakaram-badiny?”. Dia notantarainy teo, hena matavy sy hanim-pitoloha. Tsy haiko raha mbola misy heviny izany amin’izao androntsika izao. Misy ny milaza koa fa tokony ny zava-maniry ihany no tokony hanintsika. Ary tsy isan’andro koa no misy fampakaram-bady ka hisy sakafo matsiro. Izany dia mba hitenenana hoe ilay fihinanana sakafo matsiro sy tsara dia tsy isan’andro, ka iza no tsy hitsiriritra izany? Iza no tsy ho liana amin’izany? Tsy voatery ho hatendan-kanina no hitiavana ilay mihinana, tsy voatery ho izay. Fa ny tiana ho tenenina eto dia hoe ilay fahasoavan’Andriamanitra dia misy mandrakariva ho antsika. Manatena izany ve isika? Satria voalohany, ny mandray di amino. Ataoko fa mbola izany fanantenana izany ihany no asehon’I Md Paoly amintsika amin’ny vakiteny faharoa. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 12/10/2014 – Toriteny
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 25, 6-10a)
Hanomana fanasana ny Tompo ary hamafa ny ranomaso amin’ny tava rehetra.
Amin’izany andro izany ny Tompon’ny tafika hanomana fanasana amin’ity tendrombohitra ity, ho an’ny firenena rehetra, dia fanasana amin’ny hena matavy, fanasana amin’ny divay ela niotrehana, hena matavy sy be tsoka, divay ela niotrehana sy voatantavana. Horovitiny eto amin’ity tendrombohitra ity ny voaly manarona ny olona rehetra mbamin’ny rakotra mandrakotra ny firenena rehetra. Ny fahafatesana hofoanany tsy hisy mandrakizay; Andriamanitra Tompo hamafa ny ranomaso amin’ny tava rehetra; ny henatry ny vahoakany hoesoriny tsy hisy amin’ny tany rehetra fa efa niteny ny Tompo. Izao no holazain’ny olona amin’izany andro izany: « Indro ny Andriamanitsika izay niankinantsika mba ho voavonjy, dia ny Tompo izay nantenaintsika. Aoka isika hanao fifaliana sy hiravo amin’ny famonjeny ». Fa ny tanan’ny Tompo hipetraka amin’ity tendrombohitra ity.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (Fil 4, 12-14. 19-20)
Ry kristianina havana, haiko ny mihafy, haiko ny manam-be. Efa nianatra ny ho voky sy ny ho noana aho, ary ny hanam-be sy ny tsy hanana na inona na inona, na aiza na aiza, ary na amin’inona na amin’inona. Mahefa ny zavatra rehetra aho amin’Ilay mankahery ahy; nefa tsara ny nataonareo niombom-pahoriana tamiko. Fa Andriamanitro kosa no hamonona izay ilainareo rehetra, araka ny hareny, hampombainy voninahitra ao amin’i Kristy Jesoa izany. Ho an’Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amen.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mt 22, 1-14)
Asao ho aty amin’ny fampakaram-bady avokoa izay rehetra hitanareo. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 12/10/2014 – Tenin’Andriamanitra
Io no foto-kevitra anentanan’ny fiangonana antsika amin’ity andro anio ity. Dia hiainga amin’ny Evanjely ny fampianarana ho antsika amin’izany. Jesoa miresaka amin’ny lohandohann’y mpisorona sy ny loholona, ho tohin’izay efa noresahantsika tamin’ny herin’ny androany. Ireo no mpisorona, ireo no mpitondra fivavahana tamin’izany andro izany ary notsongoin’olom-bolo. Ireo no nametrahan’Andriamanitra andraikitra amin’ny fitantanana ny fiainam-panahin’ny olona tamin’izany. Dia miteny amin’ireo Jesoa manao an’ity fanoharana ity: lehilahy tompon-trano iray namboly voaloboka ary namefy azy manodidina. Hitantsika eto hoe inona no nataon’ny tompon’ny tanim-boaloboka. Dia iza izany no tompon’ny tanim-boaloboka? Ny tompony dia Andriamanitra. Raha ny fanoharana no raisintsika, inona no nataon’ny tompon’ny tany anehoany ny fitiavany sy ny fikarakarany azy? Hitantsika tamin’ny fihetsika nataon’ny ankizy teo fa namefy azy manodidina izy, nandavaka tany hanaovana famihazana teo, ary nanao tilikambo. Ireo no zavatra natao tamin’ny tanim-boaloboka. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 05/10/2014 – Toriteny